ပီတိ: ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလည်တစ်ခေါက် - ဘန်ကောက် မှာ ဈေးဝယ်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလည်တစ်ခေါက် - ဘန်ကောက် မှာ ဈေးဝယ်
မနက် နိုးတော့ ၈ နာရီဖြစ်နေပြီ။ ဟိုတယ်က မနက်စာစားဖို့ သွားတော့ ထမင်းစားခန်းနားမှာ ခရီးသွားကုမ္ပဏီက အရောင်းကောင်တာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်မိတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကွေးမြစ်တံတားခရီးစဉ်ကို စုံးစမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို ဘတ် ၁၉၀၀ ၊ ခရီးစရိတ်အပြင် နေ့လည်စာပါကျွေးမယ် အပြီးအစီးဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ သွားဖို့ကိုတော့ တနင်္လာနေ့ကို ရွေးလိုက်တယ်။ ဒီနေ့ကိုတော့ စနေ-တနင်္ဂနွေမှာပဲ ဖွင့်တဲ့ Chatuchak Weekend Market ကိုသွားဖို့ ရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်နေလို့လေ။
မနက်စာစားပြီးတော့ ရုံးကလူ တချို့နဲ့ တက္ကစီငှားပြီး ချတုချတ်ဈေးကိုချီတက်သွားကြသည်။ တက္ကစီနှစ်စီးကားသွားပေမယ့် ဟိုရောက်တော့ အရင်သွားတဲ့ အဖွဲ့တွေကိုရှာမတွေ့။ ကိစ္စတော့မရှိ - ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်သွား ဘယ်သူ့ကိုမှ မစောင့် ပြီးရင် ကိုယ့်အစီအစဉ်သာပြန်ဖို့ ပြောထားပြီးသား … တက္ကစီခက ဘတ် ၈၀ ကျတယ်။
ချတုချတ်ဈေး က ဈေးဆို တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးပြီးသား - ဈေးဆစ်ရင် တစ်ဝက်မက ဆစ်ဖို့ ပြောထားကြတဲ့နေရာ။
ဈေးရောက်တော့ သြော် ရန်ကုန်က လေဟာပြင်လိုဈေးကြီးကိုး…
ဈေးဝင်ကတည်းက တွေ့ရတာ အ၀တ်အထည်တန်းတွေ… ဈေးတွေမေး - ပြောသလိုဈေးဆစ်ကြည့်တော့ ဘယ်လိုမှမရ။ ၁၀ဘတ် ၊ ဘတ်၂၀ လောက်တောင် မနည်းဆစ်ယူရတယ်။ မယူဘူး ဆိုပြီး မူပြီး ထွက်သွားတော့လည်း ပြန်မခေါ်ဘူး။ အဲတော့ ဈေးအမှန်ပဲပြောနေတာလား စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်။
တီရှပ်တစ်ထည်မှာ ရေးထားတဲ့ စာသားကိုကြိုက်လို့မေးကြည့်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ကိုက်တဲ့ဆိုက်ဆို ဘတ် ၁၈၀ တဲ့… မနည်းဆစ်တော့မှ ၁၅၀ နဲ့ရလာသည်။
ထိုင်းပိုး ပ၀ါလေးတွေလှလို့မေးတော့ ဘတ် ၂၀၀ က မဆင်း။ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်သာကြည့်တယ် ဘာမှသိပ်မ၀ယ်ဖြစ်။ နောက်ထပ် ထိုင်း စတိုင် ချည်သားအင်္ကျီလေးလှလို့ ဈေးဆစ်ဝယ်တော့ ဘတ် ၂၅၀ နဲ့ရလာတယ်။
သူက ပ၀ါတွေကိုဈေးမေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးကကြီးနေတာနဲ့ မ၀ယ်ဖြစ်။ တစ်ဆိုင်ကတော့ နှစ်ထည်ကို ဘတ်၂၅၀နဲ့ပေးတယ်။ တစ်ထည်ကို ဘတ် ၁၀၀ နဲ့ဈေးဆစ်တာ မအောင်မြင်တာနဲ့ ထားခဲ့ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။
ဈေးကတော်တော်ကြီးကြီးပြီး ဆိုင်တွေကလည်း စုံလှသည် - လက်မှုအထည်တွေ၊ ပရိဘောဂ၊ ပန်းအလှပြင်၊ အမွေးအကြိုင်၊ အစားအသောက်၊ အ၀တ်အထည်၊ အကုန်အစုံရှိတယ်။
ချောင်ကျတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ သားရေအိတ်ကလေးတွေလှလို့မေးကြည့်တော့ ဘတ် ၃၅၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၄၀ ခန့် ) တဲ့၊ သူက စိတ်ဝင်စားပြီး ၀ယ်ချင်ပေမယ့် လက်ရာက အရမ်းကြီးမသေသပ်ဘူးဆိုပြီး အပြစ်ရှာပြောကာ သူ့ကို ဆွဲခေါ်လာခဲ့တယ်။
ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ သံလိုက်နဲ့ကပ်လို့ရတဲ့ အမှတ်တရပစ္စည်းတွေ ၀ယ်တတ်တာမို့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ သုံးခုကို ဘတ် ၁၀၀ နဲ့ ရအောင်ဆစ်ပြီးဝယ်လာခဲ့မိသေးတယ်။
ဈေးပတ်ပြီး မောလာတော့ ထိုင်းရေခဲလက်ဖက်ရည်သောက်ပြီးအမောဖြေ။ နောက်တစ်နေရာရောက်တော့ ကြွေဘုရားပန်းအိုးကို တစ်အိုးကို ဘတ် ၇၀ နဲ့ ဈေးဆစ်ဝယ်လာခဲ့တယ်။
ကွမ်းရွက်ကို ကြက်သွန် သံပုရာသီး နဲ့ အချိုရည်တွေထည့်ပြီး ကွမ်းယာလိုယာနေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့တယ်။ ဘာမှန်းမသိလို့ ၀ယ်မစားခဲ့တော့ဘူး။
ပြီးတော့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရင်း ထိုင်းပိုး ပ၀ါဆိုင်တစ်ခုကိုရောက်တော့ ဈေးဝင်မေးရင်ကြည့်တော့ ဈေးကမဆိုး တစ်ထည်ကို ဘတ် ၁၀၀ တဲ့။ ၈၀ နဲ့ရမလားဆိုတော့ ၅ထည်တော့ အနည်းဆုံးဝယ်ပါ ဆိုတာနဲ့ ရွေးနေရင်းကနေ ရောင်းတဲ့ကောင်လေးကတည်း ဗမာပဲ ဖြစ်နေတာသိလိုက်ရတယ်။
ဆိုင်မှာအရင်ရောက်နေတဲ့ အနောက်တိုင်းသူ အဖွားကြီးနဲ့ အပြိုင်ရွေးလိုက်ကြတာ၊ ပ၀ါအရောင်တစ်ခုကြည့်လိုက် ကြိုက်လိုက် ယူလိုက်နဲ့ ၊ အဖွားကြီး ၁၇ ထည်၊ သူက ၁၂ ထည်။ အဖွားကြီးကို တထည်ကို ဘတ် ၈၀၊ သူ့ကို တထည် ဘတ် ၇၀ နဲ့ ရလာခဲ့တယ်။ ပ၀ါတွေ အများကြီး ဘာလုပ်ဖို့လဲမေးတော့ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် လက်ဆောင်ပေးဖို့တဲ့ ဘတ် ၇၀ မှ ၃ဒေါ်လာ နီးပါးပဲရှိတာ၊ ၀န်လည်းကျဉ်းတယ်၊ ပေးရတာလဲလှတယ်၊ ဈေးလည်းသက်သာတယ်လေ ဆိုတော့ … အင်းဟုတ်တာပဲလေ ဆိုပြီး ပိုက်ဆံထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်။
ပြီးတော့ ထိုင်းက မုန့်ဟင်းခါးကိုတွေ့တော့ အစပ်တစ်ပွဲ သိပ်မစပ်တဲ့ တစ်ပွဲမှာစားကြတယ်။ တစ်ပွဲကို ၃၅ဘတ်၊ အဲဒါကတော့ တော်တော်တန်တယ်။ သိပ်မစပ်လည်း တော်တော်စပ်တာပဲ။ အဲဒါနဲ့ ကိုကာကိုလာ တစ်ပုလင်းကို ဘတ် ၂၀ ပေးသောက်လိုက်ရတယ်။ နေ့လည်စာကို ဘတ်၁၀၀အောက်ပဲသုံးပြီး ဖြေရှင်းလိုက်တာပေါ့…
ဈေးဝယ်လို့ ပြီးပြီလို့ ထင်ရင် မှားပါလိမ့်မယ်။ သူက တစ်ထည်ကို ဘတ် ၁၀၀ တန် မိန်းကလေးဝတ် တီရှပ်တွေ ၄-၅ထည်ဝယ်၊ ပြီးတော့ ဘတ် ၂၅၀တန် ဂါဝန်ကိုဝယ် ခဲ့သေးတယ်။ ဟိုပတ်ဒီပတ်နဲ့ ပင်ပန်းလာတာနဲ့ ပြန်ရအောင်ဆိုပြီး တက္ကစီငှားပြီး နှစ်ယောက်သား ဟိုတယ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။
လမ်းတစ်လျှောက်အဆင်ပြေလာတာ ဟိုတယ်နားနီးမှ လမ်းတွေကကျပ် အချိန်တွေကြာ တက္ကစီမီတာတက်။ ဟိုတယ်နားနီးနေပြီး လမ်းဆင်းလျှောက်မယ်ဆိုတော့ တက္ကစီသမားက သိပ်မကြိုက်၊ ရောက်တော့မယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံပြော၊ ကိုယ်ကလည်း လမ်းဆင်းလျှောက်မယ်လုပ်၊ နောက်တော့ ကျတဲ့ ၉၇ဘတ်ကို ၁၀၀ ပေးပြီး ပြန်မအမ်းတော့နဲဆိုပြီးထားခဲ့တယ်။
ဟိုတယ်ရောက်တော့ မြန်မာအဖွဲ့တွေက Platinum Mall နဲ့ အနားက ပရာတူနံ (Pratunam) ဖက်မှာဈေးဝယ်သွားမှာ လိုက်ခဲ့ပါလားမေးတော့ မလိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဟိုတယ်ရောက် ခဏနားနေတုန်း မြန်မာပြည်တုန်းက အလုပ်အတူလုပ်ဖူးခဲ့တဲ့ မစုကိုခေါ်ကြည့်တော့ ခေါ်လို့မရ… ရေချိုးပြီး အနားယူပြီး ပြန်ခေါ်တော့ကျတော့ ခေါ်လို့ရတယ်။ မစုက ထွက်လာမယ် ညစာစားမယ်၊ တစ်နာရီလောက်ကြာမယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ဟိုတယ်အောက်ကိုဆင်းပြီး ခရီးသွားကုမ္ပဏီကောင်တာကို ကွေးမြစ်ခရီးစဉ်ကိုဝယ်ဖို့ မေးတော့ ပိတ်တော့မယ်။ အဲဒါနဲ့ ပိုက်ဆံကြည့်တော့ မလောက်တာနဲ့ ဘေးမှာရှိတဲ့ Big C Supercentre မှာသွားပြီး ငွေလဲ။ ပြီးတော့ ခရီးစဉ်အတွက် ဘတ် ၃၈၀၀ ပေးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ အပြင်ထွက် လေးမျက်နှာဘုရားဖက်ထွက်ပြီး ဘုရားဖူးကြတယ်။ လေးမျက်နှာဘုရားက နာမည်ကြီးဆိုတော့ လူစည်တယ်လေ။ ပြီးတော့ အဲဒီမှာ အလှူငွေထည့်ရင် အကနဲ့ ထိုင်းရှေးအ၀တ်အစားနဲ့ ဘုရားဝတ်ရွတ်ပေးတဲ့ အဖွဲ့လည်း တွေ့ရတယ်။ မြန်မာသင်္ဘောသားတွေကတော့ ဒီလေးမျက်နှာဘုရားကိုလာဖူး လေ့မရှိဘူးတဲ့။ လေးမျက်နှာဘုရားကိုဖူးရင် ဘန်ကောက်ကိုပြန်လာရတတ်လို့တဲ့…
မစုရောက်လာတော့ ရက်နမ်းလမ်းမှာ ညစာစားဖို့ ခေါ်သွားပြီးစားကြတယ်။ ငါးဆားငံသီးဟင်းရည်က တော်တော်သောက်လို့ကောင်းခဲ့တယ်။
စားပြီးတော့ လမ်းဘေးမှာ ရောင်းနေတဲ့ ပြောင်းဖူးပြုတ်သည်တွေ့တော့ သူကမနေနိုင် တစ်ဖူးဝယ်ပြီးစားလိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အချိုတည်းဖို့ဆို မုန့်လုံးရေပေါ်လေးတွေဝယ်လာခဲ့တယ်။ တစ်မျိုးကို ဘတ်၂၀။ လမ်းဘေးမှာ ရောင်းတဲ့အစားအစာတော်တော်များများက တစ်ခုကို ဘတ်၂၀နဲ့ရောင်းတာ ပုံမှန်ဈေးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
အဲဒီကနေ လမ်းလျှောက်ပြီး Victory Monument ဖက်လမ်းလျှောက်သွားကြတယ်။ အဲဒီကနေမှာ မစုက ပြန်သွားပြီး ကျွန်တော်တို့ကတော့ MBK ဖက် ရထားစီးပြီးသွားခဲ့တယ်။ လက်မှတ်ဝယ်တော့ တစ်ယောက်ကို ၂၅ ဘတ်။
ရထားလက်မှဝယ်ရတဲ့စက်က အကြွေပဲလက်ခံတော့ ကောင်တာမှာ အကြွေလဲလို့ရတယ်။ ပြီးတော့ လက်မှတ်ရောင်းတဲ့စက်မှာ ဘယ်ကိုသွားမလဲအရင်ကြည့်ရင် ဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုတာသိရတယ်။ အဲတော့မှာ စက်မှာ လက်မှာတန်ဖိုးကိုနှိပ် (ဘတ်၂၀၊ ၂၅ ဘတ်၊ ဘတ် ၃၀) နဲ့ရေးထားတယ်။ ပြီးတော့မှ အကြွေစေ့ကိုထည့်ရင် လက်မှတ်ထွက်လာတယ်။ လက်မှတ်က အရင် စင်္ကာပူမှာသုံးခဲ့တဲ့ သံလိုက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ပလတ်စတတ်ကတ်ပါးလေးတွေပါပဲ။
MBK ရောက်တော့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် တီရှပ်ဆိုင်တွေ့ တစ်ထည်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ ၉၉ဘတ်။ ချတူချန်ဈေးမှာ ဘတ်၁၅၀အောက်မဆင်းတဲ့ တီရှပ်တွေလေ။ ဈေးဆစ်စရာမလို ဒီဇိုင်းတွေကလည်း အလှစားလေးတွေချည်းပဲ။ နောက်တော့ စားဖို့ မုန့်အခြောက်တွေဝယ်။
ဘာဝယ်ဦးမလဲဆိုတော့ ၀ယ်စရာမရှိတော့ဘူး ပြန်ထွက်ပြီးမှ သူက စင်္ကာပူက မိတ်ကပ်ယူလာဖို့ မေ့လာလို့ မိတ်ကပ်ဝယ်ချင်တယ်လို့ ဆိုလာတယ်။ မိတ်ကပ်မပါရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် မလှဘူးဖြစ်နေမှာလို့လည်း ထပ်ပြောလေရဲ့….။ အဲဒါနဲ့ပဲ MBK ထဲကိုပြန်ဝင် ရွေးလိုက်တာ Shiseido၊ မနက်ဖြန်ကျ ခရီးသွားဦးမှာဆိုတော့ ပိုက်ဆံ မပေးချင်တာ ကဒ်နဲ့ပဲပေးမယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ပေးတော့လည်း သတိထားပြီး ပိုက်ဆံသိပ်မရှိတဲ့အကောင့်နဲ့ ဆက်ထားတဲ့ debit card နဲ့ပဲပေးလိုက်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားတိုင်းပြည်မှာ credit card သုံးရင် သတိထားတဲ့ အနေအထားကြောင့်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ငွေသားပဲသုံးတာအကောင်းဆုံးပါ၊ ဈေးလည်းသက်သာတယ်၊ တခြားအန္တရာယ်လည်းကင်းတယ်လေ။
၀ယ်ပြီးတော့ BTS နဲ့ပဲ ဟိုတယ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ ဟိုတယ်ရောက်တော့ပဲ ည ၁၀နာရီခွဲ ၁၁ နာရီလောက်ဖြစ်နေပြီ။ ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး ဖုန်း၊ ကင်မရာ ဘက်ထရီတွေကို ဖြည့်ပြီးတော့ အနားယူလိုက်တော့တယ်။
နောက်နေ့လည်း ခရီးဆက်ရဦးမယ် - ကွေးမြစ်ပေါ်ကတံတားကို ။
မှတ်ချက်။ ။ Chatuchak ဈေးက ဈေးလည်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးဝယ်လို့မကောင်းပါ။ အလွန့်အလွန် ကြိုက်ပြီး ဈေးအင်မတန်တော်နေရင်တော့လည်း ၀ယ်လို့ရပါတယ်။
Platinum Mall၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်က Pratunam ဈေး၊ MBK တို့မှာ ၀ယ်ရင်တောင် သက်သာတတ်ပါသေးတယ်။
Posted by P.Ti at Tuesday, October 09, 2012
Labels: ခရီးသွားမှတ်တမ်း, ဓာတ်ပုံများ, ပီတိအကြောင်း, ဘန်ကောက်
သေချာရေးနော် ဘန်ကောက်သွားရင် အညွန်းလုပ်ပြီး ဒီဘလော့ကိုင်ပြီးသွားမှာ....
ပုံတွေ ဘာတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ပါလား....။
စာမရေးတာကြာလို့များလား.. အစ ပိုင်းမှာ "တယ် " ရေးလိုက်၊ "သည်" ရေးလိုက်ဖြစ်နေတယ်....
အမခဥမ အညွှန်လုပ်သွားလို့ တလွဲရောက်သွားရင်တော့ မသိဘူးနော်....
ဆင်ဆင် စာပြန်ရေးတော့ တချို့ဝါကျတွေဆို ပြန်ဖတ်မှ နားမလည် အစီအစဉ်မကျတာတွေ အများကြီးတွေ့နေရတယ်။ လာဖတ်ပြီး မှတ်ချက်ရေးတာ ကျေးဇူးပဲ။
ထိုင်းကို အရင်ကအကြိမ်ကြိမ် ရောက်ဘူးခဲ့ပေမယ့် ဘန်ကောက်မှာတင်အချိန်ကုန်ခဲ့တာ။ ဘလော့ဂါ မိတ်ဆွေတွေလည်းရရော ထိုင်းဘက်မရောက်ဘူး ဖြစ်နေတယ် အခုလို ပုံတွေမြင်တော့ သွားလည်ချင်တဲ့စိတ် ပေါ်လာပြန်ပြီ ပီတိရေ။ စေ့စေ့စပ်စပ်လေး ရေးတင်ထားတာ ကျေးဇူးပါ။
I'll immediately take hold of your rss feed as I can't to find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me recognize in order that I may subscribe. Thanks. capital one card login in
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလည်တစ်ခေါက် - ကန်ချနာဘူရီ
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလည်တစ်ခေါက် - အယုဒ္ဓယ